admin – Page2– mero sathi tv
२२ चैत्र २०७४, बिहीबार १६:०१ April 5, 2018
LeaveaComment on किन भए पल शाह ट्रोलको शिकार ? के अनमोल, प्रदिप र पलले धानेका हुन् त फिल्म नगरी ?
नायक पल शाहलाई चलचित्र ‘म यस्तो गीत गाउँछु’ मा नायक बनाएका निर्देशक सुदर्शन थापाले फेसबुकमा लेखे- ‘फिल्म बोल बच्चन भएर चल्दैन, अभिनयले चल्छ याद गर्नु ।’ सुदर्शनले नायक पल शाहको एक अभिव्यक्ति र त्यसलाई लिएर बनेको ट्रोल भिडियो शेयर गर्दै यस्तो लेखेका हुन् । कलाकार विपना बस्नेतले सोही ट्रोल भिडियो शेयर गर्दै लेखिन्-‘फिल्म नगरी धान्न […]
२२ चैत्र २०७४, बिहीबार १५:५४ April 5, 2018
LeaveaComment on को हुन् २०७४ की सर्वोत्कृष्ट नेपाली नायिकाहरु ? हेर्नुहोस् …
नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा अभिनेता मात्र नभएर अभिनेत्रीहरुले पनि प्रभाव जमाउन थालेका छन्। नेपाली चलचित्र क्षेत्रले अभिनय क्षमता भएका नयाँ अभिनेत्रीहरु पनि पाइरहेको छ। अहिलेका लोकप्रिय नायिकामा प्रियंका कार्की ,केकी अधिकारि, स्वस्तिमा खड्का, वर्षा राउत, आंचल शर्मा, साम्राज्ञी राज्य लक्ष्मी शाह, पूजा शर्मा आदि हुन्। यो वर्ष प्रियंका कार्कीले अरु अभिनेत्रीको तुलनामा सबैभन्दा धेरै फिल्म खेलिन्। […]
२२ चैत्र २०७४, बिहीबार १५:४३ April 5, 2018
LeaveaComment on धेरैलाई सताउने युरिक एसिड बढेर तनाबमा हुनुहुन्छ? यी घरेलु उपायहरु अपनाउनुहोस र छुटकारा पाउनुहोस्
युरिक एसिड रोगलाई एक दिर्घकालिन रोग मानिन्छ । त्यसैले यस्तो रोग लाग्नु भन्दा पहिले लनग्न नदिनु नै उचित हुन्छ । आधुनिक जिवनशैलि तथा खानपानमा आउने भिन्नताका कारण युरिक एसिडको समस्याले सताउन थाल्दछ । आउनुोस यस्ता उपायहरु अपनाएमा यस्तो रोगवाट बच्न सकिन्छ । १. बढी तौल भएका मानिसहरुलाई युरिक एसिडले सताउन सक्छ । त्यसैले बढी तौल […]
२२ चैत्र २०७४, बिहीबार १५:३८ April 5, 2018
LeaveaComment on सारै दुब्लाउनु भयो? यी १० घरेलु उपाय अपनाउनुस् सजिलै मोटाइन्छ !
कामको थकान, हर्मोनमा आउने परिवर्तन, कुनै बिमारी अनि अस्वस्थकर खानपानका कारण दुब्लोपन अनि कमजोरी हुन सक्दछ। वजन अधिक कम हुँदा शरीरको रोग प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हुन्छ। फलत: रोगहरुले च्याप्ने गर्छ। यहाँ केही सजिला घरेलु उपायको चर्चा गरिएको छ जसले यी समस्या निर्मूल पार्न सक्छ। १. एक गिलास दुधमा आधा चम्चा दालचिनीको धुलो र एक चम्चा […]
२२ चैत्र २०७४, बिहीबार १५:३३ April 5, 2018
LeaveaComment on यस्तो अवस्थामा ‘तुलसीको पात’ खानु हुदैन,खायो भने विष सरह बनिदिन्छ
हुन त तुलसीको पातले विभिन्न किशिमका स्वास्थ्य समस्याहरुलाई निर्मुल पार्ने गर्दछ । आयुर्वेदमा पनि तुलसीको महत्वका बारेमा निकै चर्चा गरिएको छ । करिब–करिब सबै नेपालीको घरमा तुलसीको पात राखिएको हुन्छ भन्दा अतियूक्ती नहोला । तुलसीको पूजा गर्नुका साथै यसको डाँढ तथा पातलाई औषधिको रुपमा पनि प्रयोग गर्ने गरिन्छ । तर धेरैलाई थाहा नहुन पनि सक्दछ […]
२२ चैत्र २०७४, बिहीबार १५:२८ April 5, 2018
LeaveaComment on सायद तपाईलाई थाहा नहोला, धेरै रोगको लागी अमृत हो सिस्नो – पढ्नुहोस
हातको मैला सुनको थैला के गर्नु धनले, साग र सिस्नो खाएको बेस आनन्दी मनले’ महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाका यी पंक्तिमा मात्रै सीमित रहेन अहिले सिस्नोको चर्चा । कुनै बेला गाउँघरमा दुई छाक खानाको जोहो गर्न नसक्नेहरूले समेत तुच्छ खानाको रूपमा लिने गरेको सिस्नो अहिले शहरका ठूला–ठूला डिपार्टमेण्ट स्टोर, तारे होटल, रेष्टुँराहरूमा महँङ्गो खानाको परिकारमध्येमा पर्न थालेको […]
२२ चैत्र २०७४, बिहीबार १५:२३ April 5, 2018
LeaveaComment on अम्बाको अम्बाको पात सेवन गर्दा हुन्छ स्वास्थ्यमा यी चमत्कारिक फाइदाहरुपात सेवन गर्दा हुन्छ स्वास्थ्यमा यी चमत्कारिक फाइदाहरु
हाम्रै घर तथा वरपर पाईने कतिपय यस्तो चिजहरु जसको प्रयोग र फाइदाको बारेमा हामी अन्जान रहेका हुन्छौँ र सानो समस्यामा पनि केमिकल युक्त बजारमा पाईने औषधी सेवन गर्ने गर्छौँ । कतिपय घरेलु जडिबुटीले पनि धेरै किसिमका स्वास्थ्य समस्या समाधान गर्न सकिन्छ । आज हामी त्यहि जडिबुटीको रुपमा लिईने अम्बाको पातको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ । अम्बा […]
शरीरका यी अंगमा कोठी छ भने पटक-पटक नछुनुहोस्, डरलाग्दो रोग लाग्न सक्छ
२२ चैत्र २०७४, बिहीबार १५:१६ April 5, 2018
LeaveaComment on शरीरका यी अंगमा कोठी छ भने पटक-पटक नछुनुहोस्, डरलाग्दो रोग लाग्न सक्छ
शरीरका कुनै क्षेत्र यस्ता संवेदनशील हुन्छन्, जहाँ पटक-पटक हात लगाउँदा विभिन्न संक्रमण हुनुका साथै रोग नै लाग्न सक्छ । एक्सपर्टका अनुसार यस्ता अंगमा अतिआवश्यक समयबाहेक पटक-पटक हात लगाउनुहुँदैन : कानमा कहिल्यै पनि औँला वा अरू वस्तुले पटक-पटक घोच्नुहुँदैन । मेडिसिन आफ युएससीको हेड एन्ट नेक सर्जरीका प्रमुख प्रोफेसर नोन के निपार्कोलेभ नेकाले भनेका छन्, ‘कानमा […]
तिल कोठी आएर हैरान हुनुहुन्छ ? चिन्ता नलिनुस् , घरमै बसी -बसी यसरी हटाउन सकिन्छ
२२ चैत्र २०७४, बिहीबार १५:११ April 5, 2018
LeaveaComment on तिल कोठी आएर हैरान हुनुहुन्छ ? चिन्ता नलिनुस् , घरमै बसी -बसी यसरी हटाउन सकिन्छ
सबैलाई यो तिलकोठी के होला किन आको होला भन्ने लाग्छ होला । हाम्रो छाला लाइ रङ दिने कोसीका हरु एकै ठाउमा बसी जब खुनमा फैलिन पाउदैन तब यसले तिलको रुप लिन्छ । यो कालो ,रातो र खैरो रङको पनि हुन सक्छ । यो तिल मानिसको अनुहार र शरीरमा पनि फैलिएको हुन्छ । यदि यसले तपाइलाइ […]
पुरुषभन्दा महिलाको धड्कन छिटो चल्छ ! कारण यस्तो छ
२२ चैत्र २०७४, बिहीबार १५:०७ April 5, 2018
LeaveaComment on पुरुषभन्दा महिलाको धड्कन छिटो चल्छ ! कारण यस्तो छ
हालै गरिएको एक अध्ययन अनुसार महिला पुरुषभन्दा चाँडै थाक्ने थाक्ने गरेका छन् । अध्ययनमा भनिए अनुसार महिलाको शरीरको घडि पुरुषको शरीरको घडीको तुलनामा १.७ देखि २.३ घण्टा तिव्र चल्ने गर्छ । जस कारण महिलाहरु पुरुषको तुलनामा चाँडै थाक्छन् र साँझ पर्ने वित्तिकै उनीहरुलाई निद्रा लाग्न थाल्छ । यो अध्ययन क्यानडा स्थिति ल्याकेस्टर यूनिभर्सिटी मेडिकल स्कूलका […]